Daawo Video: Turkiga oo Muqdisho ka her geliyay mashruucyo haweenka...! - Caasimada Online
Home Xul Daawo Video: Turkiga oo Muqdisho ka her geliyay mashruucyo haweenka…!
Daawo Video: Turkiga oo Muqdisho ka her geliyay mashruucyo haweenka…!
Dowlada Walaalaha ee Turkiga oo si dhab ah u garab taagan Walaalaheeda Soomaaliyeed ayadoo Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ka wada howlo badan oo mashaariic ah oo isugu jira Dhismooyin & Deeqo wax barasho.
Arintani ka farxisay Haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee uu Turkiga ka her galiyay magaalada ayaa ah mid ay aad u hadal hayeeyn Haweenka ku nool Gobolka Banaadir ee nala daawo Muuqaalkani farxadeed.